PVTV ၏ တော်လှန်ရေးအနုပညာ ကဏ္ဍ (ဆောင်းပါး)… – PVTV Myanmar
PVTV ၏ တော်လှန်ရေးအနုပညာ ကဏ္ဍ (ဆောင်းပါး)
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၆) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဆရာ ခေတ်နွေဦးရေးသားထားတဲ့ အထူးဆောင်းပါး “ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင်” ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 9.2K Share – 1511
KD Phyoe says:
2021-06-19 at 7:21 PM
လူကြမ်းတွေသာပြောင်းသွားတယ် မင်းသမီးကတော့ ပန်းပန်လျှက်ပဲ
2021-06-19 at 7:35 PM
Real truth . Steel rose.
2021-06-20 at 1:15 AM
2021-06-20 at 2:34 AM
Thein Sein and Shwe Mann are not good men either.
2021-06-20 at 8:22 AM
ငါတို့ မေမေ အသက်ကြီးပြီဗျာ…..ငါ့တို့ ခုထိ ဘာတခုမ တာဝန်မကျေသေးဘူး……
အမေအိုရဲ့ နောက်မှာ Gen Z တွေ အမြဲ၀န်းရံနေပြီး
မအလ နောက်မှာတော့ ခွေးတေပဲ ၀န်းရံနေကြောင်း
Khin Thandar Oo says:
Htin Kyaw San says:
2021-06-20 at 9:33 PM
မြင်းခြံခရိုင် တောင်သာမြို့နယ်ထဲက ကန်မြဲကိုအေးကျော်ရေ ဘယ်သူပြိုင်လို့ လှပါတော့နိုင်အတွက် ထာဝရ ကျေးဇူးတင်နေမှာပါ
Kyawhtetnaing Kyawhtetnaing says:
2021-06-21 at 4:17 PM
Htu Raw says:
2021-06-21 at 10:06 PM
အိမ္က မိဘေတြရန္ျဖစ္တာေတာင္ အေမဘက္ကရပ္တည္ေနတဲ့စိတ္ကခုေတာ့ ပို၍သာ😘😘😘
2021-06-22 at 7:20 AM
မွန္လိုက္တ့ဲစကားေလး စားတယ္ အခုမွအေမသမိုင္းအေၾကာင္းစုံသိရတယ္
Daw Khin Khin Htwe says:
2021-06-22 at 12:16 PM
ပြည်သူကိုရင်ဝယ်သားကဲ့သို့သဘောထားတဲ့ မိခင်ကြီး အမြန်လွတ်မြောက်ပါစေ အမေ ကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ အသက်ရာကျော်ရှည်ပါစေ အမေ 🙏🙏🙏
2021-06-22 at 12:39 PM
Daw Pyone says:
2021-06-22 at 2:11 PM
အစကေတာ့ ျပည္သူေတြဟာ အခုေခာတ္နဲ႔ေတာ့မတူေတာပ
Ah Ser Mee says:
2021-06-23 at 10:00 AM
ေဒၚ ျကဴ says:
2021-06-26 at 5:02 AM
ေကာင္းလိုက္တ့ဲသုဲးသပ္ခ်က္ပါ။ေမတၱာ ေစတနာ ဥာဏ္စြမ္းအားကိုအေမပိုင္ဆ္ုင္ေနေသာအေမ အျမန္ဆုံးျပည္သူေရွ့မွာဖဦးေဆာင္နိုင္ပါေစ။
2021-06-26 at 3:11 PM
အမေ ကျန်းမာပါစေ အောင်ပန်းတွေဝေနေအောင်ပန်ပြမဲ့နေ့ ရောက်တော့မှာပါ
Sonny Thet Khine says:
2021-06-27 at 11:28 PM
ဟုတ်ပါသည်၊ စစ်​ခေါင်း​ဆောင်​တွေအထဲမှာ အညံ့ တကအညဲ့ ဆုံးနဲ့ပက်ပက်စက်စက်ပြည်သူ/သားများအ​ပေါ် သတ်ဖြတ် ညှင်းပန်းနှိပ်ဆက်ခဲ့တဲ့ မအလ ကဘယ်လိုမှတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့မရ​တော့ပါဘူး
2021-06-29 at 5:39 PM
Shwe Aye says:
2021-06-29 at 6:08 PM
2021-07-29 at 5:25 PM